SAWIRO:-Khamrigii ay qabteen Booliska Dhuusamareeb oo la burburiyey - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Khamrigii ay qabteen Booliska Dhuusamareeb oo la burburiyey
SAWIRO:-Khamrigii ay qabteen Booliska Dhuusamareeb oo la burburiyey
Talisyada Ciidamada Booliska iyo Nabadsugida Galmudug ayaa Magaalada Dhuusamareeb ku burburiyey Khamri farabadan oo lagu soo qabtay howlgal ay Ciidamada ka fuliyeen Xaafado ka tirsan Magaaladaas.
Goob fagaaro ah oo ku taalla Magaalada Dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen dadweyne farabadan ayaa lagu burburiyey dhalooyin uu ka buuxay khamriga.
Howlgalka lagu soo qabtay khamrigaas iyo dad ka Ganacsanayey ayaa saakay waaberigii hore waxaa ay Ciidamada ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Magalada Dhuusamareeb oo ay saraakiishu sheegeen inay u aheyd bar tilmaaeed gaar ah.
Saraakiisha Ciidamada Booliska iyo kuwa NISA ee Magalada Dhuusamareeb oo hadal ka jeediyey goobta lagu burburiyey dhalooyinka Khamriga ayaa waxaa ay sheegeen in ay soo qabteen saddex ruux oo ahaa dadkii lahaa,isla markaana ay cadaaladda horgeyn doonaan.
Previous articleShabaab oo sheegtay inay la wareegeen Saldhigyo ay baneeyeen Ciidanka Dowladda
Next articleGuddiga Madaxa Bannaan ee Xaduudaha Hir-Shabeelle oo la Magacaabey